Waxaa la soo gaba gabeeyay shirkii Istanbul ee looga hadlayay Mustaqbalka Soomaaliya, kaasoo ay ka qeyb galeen 54-dowladood, iyadoo shirkan laga soo saaray war murtiyeed ka kooban qodobo badan. | Codkamudug.com	Home
Friday, June 1st, 2012 | Posted by admin Waxaa la soo gaba gabeeyay shirkii Istanbul ee looga hadlayay Mustaqbalka Soomaaliya, kaasoo ay ka qeyb galeen 54-dowladood, iyadoo shirkan laga soo saaray war murtiyeed ka kooban qodobo badan.
Waxaa la soo gaba gabeeyay shirkii Istanbul ee looga hadlayay Mustaqbalka Soomaaliya, kaasoo ay ka qeyb galeen 54-dowladood, iyadoo shirkan laga soo saaray war murtiyeed ka kooban qodobo badan.
Shirka Istanbul ayaa ahmiyad u lahaa arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dib u dhiska, hase yeeshee shirkii maanta ayaa looga hadlayay arrimaha siyaasada iyo ammaanka.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon oo ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo Ciidamada qaranka, bedelkii Ciidamo caalami ah loo baahnaa, waxaa uu ku baaqay in dowladda Soomaaliya la taageero.
Ra’iisul Wasaaraha Turkiga oo khudbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay in Soomaaliya aan meel cidlo ah looga tagi karin, isla markaana loo baahan yahay in dhibaatada ay ku jirto laga saaro.
Shirka ayaa markii uu soo gaba gaboobay waxaa shir jaraa’id qabtay Ra’iisul Wasaaraha Turkiga ee martida loo ahaa, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey iyo Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Dhinaca kale Dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa heshiis ka kala saxiixday, kaasoo ay kala saxiixeen Madaxweyne Shariif iyo Ra’iisul Wasaare Erdogan.
Hadaba halkan waxaa idinku soo gudbineyna war murtiyeedkii laga soo saaray shirka Istanbul II